Vaovao miafina ao amin'ny UNWTO no tsiambaratelo
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vaovao miafina ao amin'ny UNWTO no tsiambaratelo
Tsy misy mahazo avela hiresaka an-karihary izany ao Madrid ao amin'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO). Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny masoivohon'ny fikambanana mikambana dia nifaninana.
Tsy nanantena i Pololikashvili fa hisy olona afaka mamaly ara-potoana ampy hifaninana aminy amin'ny fifidianana 2021 ho avy. Tamin'ny volana septambra dia nohafoheziny ny varavarankelin'ny fanendrena azy tamin'ny martsa ka hatramin'ny janoary (2020). Ny fanazavany dia ny fananana ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka hiara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahan-tany FITUR any Madrid
Deepak Joshi, izay nambaran'ny filohan'ny holafitry ny fizahan-tany Nepal taloha eTurboNews tamin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana: "Nikasa ny hanao ny tenako ho kandidà aho, saingy tsy nisy fotoana ampy hanaovana an'io raha jerena izao tontolo izao raha sendra valanaretina."
Ny hetsika ara-drariny nataon'i Zurab Pololikashvili dia tokony hamela fotoana bebe kokoa ary tsy hihena ny fotoana hidiran'ny kandidà.
Nofoanana ny FITUR tamin'ny volana Janoary, fa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO kosa dia mbola nitandrina ny datin'ny volana janoary hanaovana ilay fifidianana. Izany indrindra no notadiaviny, ary eTurboNews nantsoina hoe ny ny hosoka tonga lafatra
Efa herinandro izao, ary tsy misy fampahalalam-baovao navoakan'ny UNWTO ny fifaninanana avy any Bahrain dia navoaka. HE Shaikha Mai binti Mohammed Al Khalifa avy any Bahrain no nanoratra ny firotsahany hofidina ho an'ny sekretera jeneraly iray herinandro lasa izay.
Na izany aza, ny UNWTO dia namoaka fanambarana an-gazety omaly momba ny Sekretera jeneraly dia nanamafy ny fahavononany hiasa akaiky amin'ny Governemantan'i Brezila mba hanampiana ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny firenena ho lasa mpamily fototra amin'ny fampandrosoana maharitra. Ny fanambarana ny fanohanana dia tonga rehefa nitarika delegasionina UNWTO Andriamatoa Zurab Pololikashvili hihaona amin'ny filoham-pirenena Jair Bolsonaro sy ny minisitry ny fizahantany Marcelo Álvaro Antônio.
Mpikambana ao amin'ny Executive Council i Brezila ary hifidy amin'ny fifidianana ho avy amin'ny volana Janoary. 1/5 amin'ny mpikambana UNWTO ihany no afaka mifidy ny Sekretera Jeneraly.
Manazava ny antony mahatonga ny firenena 35 hatrizay ho ivon'ny fifantohan'ity mpitarika UNWTO ity. Nanjary miharihary ihany koa ny antony maha-zava-dehibe ity fitsidihana any Brezila ity.
A trend to reopen global tourism set after the United States drops masks and physical distancing for vaccinated people